Imidiya yokuncokola noLonwabo | Martech Zone
Imidiya yokuncokola noLonwabo
NgoMvulo, nge-8 kaDisemba ngo-2008 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Kunyaka ophelileyo, ndibhale iposi Ngaba Unyango lweMidiya yoLuntu lunokunyanga uxinzelelo?. Kubonakala ngathi inako! Namhlanje bendinjalo happy xa umhlobo olungileyo kwaye Intengiso yaseIndianapolis yokuThengisa Umphathi uAdam Omncinci undithumelele ikhonkco elilandelayo:
Ulonwabo luyosulela kwiinethiwekhi zentlalo. Ingqungquthela:
Uphando olutsha lubonisa ukuba kwinethiwekhi yoluntu, ulonwabo lusasazeka phakathi kwabantu ukuya kuthi ga kwiidigri ezintathu zisuswe kwenye. Oko kuthetha ukuba xa uziva wonwabile, umhlobo womhlobo womhlobo unamathuba aphezulu okuziva wonwabile.
Bafumanise ukuba xa umntu eyeka ukutshaya, amathuba okuyeka ukutshaya ayengama-36 epesenti. Ngapha koko, amaqela abantu abangazani bayeka ukutshaya ngaxeshanye, ababhali babonisa inqaku laseNew England Journal of Medicine ngoMeyi.
Izixhumanisi zentlalo zikwachaphazela ukutyeba. Amathuba okuba umntu atyebe kakhulu enyuke ngeepesenti ezingama-57 ukuba wayenomhlobo otyebe kakhulu ngexesha elinikiweyo, uFowler noChristakis babonisa ephepheni kwiNew England Journal of Medicine ngoJulayi 2007.
Esi sisixhobo esinamandla esisele siqalisile ukufumanisa kwaye sisebenzise njengabathengisi. Kubalulekile ukuba uyiqonde le mpembelelo njengoko uqhubeka nokuphuhlisa iindlela zakho kwi-Intanethi. Ukufunda okongeziweyo malunga nendlela abathengi abasele bezilungisa ngayo indlela abaziphethe ngayo kwimidiya yoluntu, ndingacebisa kakhulu iNgxelo yamava okuThengiswa kwabaThengi yeRazorfish ka-2008.
Kutheni kukho uqoqosho?
Ngubani uTwitter kuwe?
Dec 8, 2008 ngo-10:41 PM
Yabelana ngalo lonke ulonwabo lwakho kwiqela elitsha http://www.smallerindiana.com ebizwa ngokuba “ziiNdaba Ezivuyisayo”! http://www.smallerindiana.com/group/excitingnews
Ngomhla wama-9 ku-Disemba 2008 ngo-8: 11 AM
Andiqondi ukuba isifundo sasimalunga nabahlobo bakaMySpace, LOL. "Inethiwekhi yoluntu" ngenjongo yophando yayiquka abantu abazi abantu ababaziyo abantu, uBarbra Streisand uquka.
Izenzo zobubele ezizenzekelayo ezenziwa kwi-Intanethi zinokuba nesiphumo esifanayo, nangona kunjalo.
Dec 9, 2008 ngo-1:26 PM
Ndiyabona apho isifundo sichanekile kwaye indlela amajelo asekuhlaleni anokwenza ngayo abantu bonwabe ngakumbi. Ngokuqinisekileyo isekelwe kwisikali esincinci sesampuli esisetyenzisiweyo. Kodwa ngaba inokuba nefuthe elibi? ukudlala nje iidemon, kodwa imidiya yoluntu inokudala ingqiqo "yabahlobo" xa enyanisweni bengekho. Abantu bangazithatha zinzulu kakhulu kwaye babethe umgangatho ophantsi xa beqonda ukuba olu budlelwane kunye noqhakamshelwano lukwi-intanethi ngokungqongqo, hayi ubuhlobo bokwenyani.